Faka iDesktop ye-Deepin ku-Ubuntu | Ubunlog
Faka iDesktop yedesktop kwi-Ubuntu
I-Deepin OS kukusasazwa kweLinux kwemvelaphi yaseTshayina, Ngaphambili ibisekwe kwi-Ubuntu, kodwa ngenxa yotshintsho rhoqo lohlaziyo oluqhubekayo, inkqubo yenguqu yenguqu yenziwa ithatha iDebian njengesiseko.
Ngelixa into Eyona nto ibonakalisa i-Deepin kukulula kokusebenzisa kwayo, kunye nokusingqongileyo kwidesktop oko kuthandwe ngabo bantu baye bazama inkqubo okanye babona nje imeko-bume.
Singaba nayo i-Deepin desktop kunye nokusetyenziswa kwendawo yokugcina izinto, umphuhlisi anoxanduva lokuyigcina ngokungafanelekanga, ukuze siyongeze ngale miyalelo ilandelayo.
Qaphela: le ndawo yokugcina izinto ayinakusetyenziswa kwiinguqulelo ngaphambi kwe-Ubuntu 17.04 kunye neziphumo zayo, okwangoku ayinakusetyenziswa kwiLinux Mint, ifumaneka kuphela kwiinguqulelo 17.04, 17.10 kunye ne-18.04.
Kuya kufuneka sivule i-terminal kwaye senze lo mthetho ulandelayo:
Ngoku sihlaziya nje iindawo zokugcina.
Kwaye ekugqibeleni sifaka indawo yedesktop ye-Deepin kwinkqubo yethu nge:
Ngexesha lenkqubo yofakelo ngokuxhomekeke kwimeko oyisebenzisayo ngoku, Ngokuqinisekileyo iya kukucela ukuba uthathe isigqibo sokuba uyafuna ukuqhubeka nokusebenzisa umphathi wakho wokungena ngoku okanye usebenzise enye ye-Deepin.
Xa inkqubo yokufaka igqityiwe, siya kuqhubeka ukuqala kwakhona inkqubo yethu Ukuze kwenziwe utshintsho olwenziwe, kufuneka sibonise kuphela kumphathi wethu wokungena ukuba sifuna ukuqhuba iseshoni yethu kunye nemo engqongileyo ye-Deepin.
Okokugqibela, ungasebenzisa iSynaptic ukubona iiphakheji ezinendawo yokugcina izinto onokuzongeza, umzekelo, umphathi wefayile ye-Deepin kunye neZiko leSoftin le-Deepin, i-Deepin Music Player, iMidlalo ye-Deepin, phakathi kwabanye.
Ukususela ngoku kuxhomekeke kuwe ukuba ubume bendawo yakho entsha kunye nemixholo, ii icon okanye imifanekiso yamaphephadonga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Faka iDesktop yedesktop kwi-Ubuntu
Ndiyilandele inkqubo yakho, kodwa andazi ukuba kutheni umculo we-deppin xa udlala umculo undixelela ukuba ifayile ayikho, (kuyacaca ukuba ivule inkqubo isebenzisa ifayile ukuze ibekhona kwaye iyavakala ngeRhythmbox) I Sebenzisa inguqulelo 17.10 yobuntu.
UMauricio Fuentes sitsho
Molo Luis, Enkosi kakhulu ngegalelo. Ndinokuthandabuza okukodwa, yeyiphi ipakethe ye icon ebonakala kwimifanekiso?
Phendula uMauricio Fuentes
E: Iphakheji ye-dde ayinakufumaneka
I-PS: Yinto ebonakala kum, kwaye andazi ukuba ndiyilungisa njani. Ewe, ndiwalandele onke amanyathelo.
Isongezo sudo-apt-reppa ppa: leaeasy / dde
Sudo apt-fumana ukufaka i-dde
Molo ndifuna ukukhupha i-desktop ejulile kwaye ndinayo i-desktop yangaphambili kwi-ubuntu 18.04,.
Faka umphathi wokukhuphela kwisiphelo sendlela ye-Aria2 ku-Ubuntu